Labsii fooyya’iinsaa kanarratti Paartiileen morkitoota Oromiyaa kan birootis hoogganoota isaanii yoo hirmaachisan gaariidga. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLabsii fooyya’iinsaa kanarratti Paartiileen morkitoota Oromiyaa kan birootis hoogganoota isaanii yoo hirmaachisan gaariidga.
CAFFEE: Adoolessa 26/2010
_______ / / _______
Caffeen Wixineewwan Labsii sadii irratti marii uummataa /Public Hearing/ Dilbataafi Sanbata dhufu qaamolee hawaasaa waliin ni gaggeessa.
Caffeen Oromiyaa aangoo Heera Naannichaatiin kennameef bu’uura godhachuun Oromiyaa keessatti seerota sirna diimokiraasii dagaagsuufi misooma Naannichaa kallattii hundaan itti fufsiisuu danda’an tumuun hojiirra oolmaa isaanii akka hordofuufi to’atuuf aangoon Labsii Lak. 201/2009 Hojimaata Caffichaa ilaalchisee baheen kennamee jira.
Bu’uura kanaan, Caffeen seerota qulqullina qaban ni tuma yeroo jedhamu qophii wixinee isaarraa eegalee hanga maxxanfamee uummata bira qaqqabutti adeemsi wixineen seeraa tokko keessa darbuu qabu ulaagaa seeraan taa’e hordofuun ta’uun akka qabus seeraan daangeffamee jira.
Ulaagaawwan taa’an keessaa tokko marii uummataa (public hearing) yeroo ta’u, mariin uummataa Wixinee Labsii qophaaye irratti kallattiinis haa ta’u al-kallattiin carraa ittiin uummanni yaadasaa ibsatu akka argatu taasisuun hirmaachisummaa hawaasaa dabaluudha.
Kanaaf, hayyoota, qaamolee mootummaafi hawaasaa adda addaa dhimmi ilaalu irratti hirmaachisuun galteewwan dabalataa fudhachuun qaama wixinichaa taasisuun gabbisuun qulqullina seeraa dabaluuf kan gargaarudha.
Caffeenis, tooftaa kana bal’inaan itti fayyadamaa kan ture yeroo ta’u, Adoolessa 28 -29/2010ttis Wixineewwan Labsii sadii (3) irratti marii uummataa /public hearing/ ni gaggeessa.
Wixineewwan kanneen keessaa tokko gurmaayina qaamolee raawwachiiftuu yeroo ta’u, Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kab. Obbo Lammaa Magarsaa Yaa’ii Idilee 8ffaa darbe irratti gurmaayina qaamolee raawwachiiftuu irra deebiin fooyyessuuf qorannoon isaa xumuuramee kan jiruufi akkaataa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda’uun qorannichi yeroo dhiyootti kan hojiirra oolu ta’uu ibsuun isaaniis ni yaadatama.
1. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa’e,
2. Wixinee Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Qophaa’e
3. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Wixineewwan Labsii sadan kanneen irratti qaamolee uummataa dhimmi ilaalu hirmaachisuun kan gaggeessu yeroo ta’u, wixineewwan kunniinis bu’aa marii kanarraa argamuun gabbatanii Yaa’ii caffee itti aanu irratti dhiyaachuun kan raagga’an ta’a.
Via: Hamza Wariyo
(Qeerroo, Hagayya 2/2018)-Qeerroon kamuu caasaa mootummaa loltuusaa itti bobbaasee Uummata nagayaa dubartii ciniinsuun wargamtuuf da’umsaaf hospitaalatti ittiin fiigan utuu hin hafnee, qiyyaafate itti dhukaasee ajjeesaa jiru waliin walgeettin goonu gonkumaayyuu hin jiru. Akkuma dhagahaa jirru Hagayya 3 / 2018 irraa jalqabee Bulchaa Aanaa, kaabinee 3 fi qeerroon quuqama sabaa qabuu jedhaman sadii Godina Jimmaa tti Walgahiif waamaa jiru. Hubadhaa Isaanuma walgayii waamu kanatu waraana ijibbaataa nutti labsee nu ficcisiisaa jira.Mootummoonni Habashaa kaleessaas ta’e kittillayyoonni isaanii har’aa dhufaa darbaan waggoota 150 oliif Uummata Oromoo Ajjeesaa, hidhaa, biyyarraa ari’aa, eenyummaasaatti akka qaanfatu gochaa, lagaa fi amantiin walnyaachisaa, qabeenyasaa saamaa, lafasaarra buqqaasaa har’a geenye. Kan har’aa kana garuu kan suukanneessaa godhu Oromoon kaleessa rakkina bahaa tiif hanga dhihatti owwaate dirmate, har’a garuu goleen tokko yeroo cidha sirbu goleen tokko haadha mucaa garaatti baattuu waliin ajjeefamuusheef boo’a. Warreen garaagarummaa kanaaf sababa ta’aniif yoomuu seenaa Oromoo gara fuulduraatti gaafatama seenaa jalaa bahuu hindanda’an.
Kanaaf Qeerroon Bilisummaa Uummatasaa mootummaan waraana itti labse kana biraa sekoondii tokkof deemuu hinqabu. Qeerroon dhaqee warra lubbuu fi dhiiga Oromoon taphatan kana waliin marii taa’uus akka miseensa warra Lola uummatarratti labsee ajjeesaa jiru kanaa ta’e ragaa ofitti bahe. Quuqama sabaa utuu hintaane qoodama sabaa fi ajjeechaa sabaaf harka galfachuudha.
Qeerroo Oromiyaa Lixaa irra.
Mi’eessotti guyyaa har’aa. Maaloo uummata keenya irratti ajjeechaan dhaabbatuu dideera. Maaliif waliif dirmachuu dadhabe Oromoon. Oromoota Haragee gaafa rakkina Oromiyaa biraa bahee falmatuuf maa sagaleen dhibe?
Eeba manguddoo waaqqefataa MM Dr.Abiyyi Ahmad fii PR. BNO Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa Washington DC.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanitti Ambaassadarri Sweden wal gayii Waliigalaa